मिर्गौला फेल भएको कसरी थाहा पाउने ? जानौं | Hamro Doctor News
काठमाडौं, २९ फाल्गुन । आज विश्व मिर्गौला दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइँदैछ । दिवसको अवसरमा मार्क इन्टरनेशनल किड्नी सेन्टरले आज प्रभात फेरि निकालेको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै लाग्ने रोग मध्ये एक बनेको मिगौंला सम्बन्धी समस्याका कारण विश्वभर ८ करोड ५० लाख भन्दा बढी मानिसहरु ग्रसित छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल सहित विश्वभर नै मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दैै छ । बालबालिका, युवा, प्रौढ, सबै उमेर समूहका मानिसमा मिर्गौलाको समस्या देखिदै आएको छ । मिर्गौला बिग्रने कारण, यसका लक्षण र बच्ने उपाए बारे मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अर्चन शम्शेर राणाको सुझाव यस्तो छ ।
मिर्गौलाले यस्तो काम गर्छ :
मिर्गौला बिग्रने मुख्य कारण :
मिर्गौलामा बिग्रदा देखिने लक्षण :
मिर्गौला रोग लाग्नै नदिन यसो गर्ने :
मुटुरोगीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्चः यस्ता छन् डा भट्टराईका सुझाव
कुन सागले कस्तो रोगबाट बचाउँछ ?
सुरक्षित गर्भपतन गराउँदाका फाइदाबारे डाक्टर श्रेष्ठका यस्ता छन् सुझाव